Waxaad jeclaan laheyd inaad ka fikirto ka wareejinta bartaada WordPress mid martigaliye ah mid kale runti waa fududahay, laakiin runtii way ku xumaan kartaa. Waxaan macno ahaan u caawinaynay macmiil xalay go'aansaday inuu ka guuro hal marti-geliye oo uu u guuro mid kale waxayna si dhakhso leh isugu rogtay fadhi dhibbasho ah. Waxay sameeyeen wixii ay dadku caadi ahaan sameyn lahaayeen - waxay sifeeyeen rakibaadda oo dhan, way dhoofiyeen keydka, waxay u wareejiyeen server-ka cusub waxayna keensadeen keydka macluumaadka. Ka dibna way dhacday page bog madhan.
Dhibaatada jirta ayaa ah in dhamaan martida loo yahay aan si siman loo abuurin. Kuwo badan ayaa leh noocyo kala duwan oo Apache ah oo leh qaybo kala duwan oo socda. Qaarkood runtii waxay leeyihiin arrimo ogolaansho funky ah oo sababa dhibaatooyin la xiriira soo rarida feylasha, iyaga oo ka dhigaya kuwo wax aqrin kara oo keliya, isla markaana sababa arrimaha soo gelinta sawirka Qaar kale waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo ah PHP iyo MySQL - dhibaato aad u xun oo ku jirta warshadaha martigelinta. Keydadka qaarkood waxaa ka mid ah feylal qarsoon oo dhibaato u geysta ciidan kale maxaa yeelay qafis u gaar ah iyo dib u wareejin loogu talagalay server-yada.
Dabcan, tan xitaa kuma darin xaddidaadda faylka. Taasi caadi ahaan waa arrinta ugu horreysa haddii aad leedahay rakibaadda weyn ee WordPress file faylka keydka keydku aad ayuu u ballaaran yahay si aad u soo dejiso oo u soo dejiso adoo adeegsanaya maamulka MySQL.
Si kastaba ha noqotee, waxaan u egnahay inaan keligeen ku tagno waxyaabahan oo, si xanuun leh, badiyaa annaga ayaynu ku kacnaa. Waxaan jeclahay qodobka cusub ee rakibida markii aan u guurayo marti-geliye cusub halkii aan ka jiidi lahaa wax dhibaato ah oo nala socda. Marka waa kuwan tallaabooyinka aan adeegsanno:
We kudar plugins midba mar si loo hubiyo inay dhammaantood is waafaqsan yihiin oo shaqeynayaan. Qaar ka mid ah horumariyeyaasha fiilooyinka waxay qabteen shaqo fiican oo ay ku jiraan dejintooda aaladda dhoofinta ama bixinta dejintooda u gaarka ah dhoofinta iyo soo dejinta.
Waan sameyn doonnaa dib ugu soo celi goobta Qalabka Webmasters ' si loo arko haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo ay Google arkayso.
Waxaan xafideynaa kooxdii martida loo ahaa ilaa todobaad ama wax la mid ah… hadiiba ay jirto arin masiibo ah. Toddobaad ka dib ama wax u eg ka dib markii aan si fiican u soconay, waxaan joojin doonaa martigeliyaha hore oo waxaan xiri doonnaa koontada.